အနိုင်ယူလိုသူကို အရှုံးပေးလို့ တကယ် နှလုံးအေးရဲ့လား…??? | New Generation For Free Burma Media
← အနိူင်ယူလိုသူကို အရှုံးပေးလို့ တကယ် နှလုံးအေးရဲ့လား
၀၉.၁၂.၂၀၁၀ အတွက် RFA Burmese သတင်းများ →
အနိုင်ယူလိုသူကို အရှုံးပေးလို့ တကယ် နှလုံးအေးရဲ့လား…???
အခြေခံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ခိုင်မာမှု မရှိခြင်း ၊ သင်ကြားပြသပေးသည့် ဆရာဆရာများ၏ အားနည်းချက် ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ချို့တဲ့သော ကျောင်းသားများနှင် စဉ်ဆက် မပြတ် ပညာသင်ယူရေး စနစ်ဟု အမည်ခံကာ မအောင်မရှိ ပညာရေး စနစ်တို့ ပေါင်းစုံသောအခါ ကျောင်းသားများ၏ အတွေးအခေါ် ညဏ် အမြော်အမြင် များကို ထိရောက်အောင် မပံ့ပိုးပေး နိူင်ကြတော့… ဥယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ မ၀ရေစာ လစာပေးထားမှုတို့ကြောင့် ပန်းပျိုးလက်တို့သည် ပန်းပင်များကို ချစ်ခင်မြတ်နိူးတန်ဖိုးထားသော စိတ်ထားတို့ဖြင့် မပြုစုချင်ကြတော့ ။ သင်တင့်မျှတသော မြေသြဇာ ၊ ရေ နှင့် နေရောင် ခြည် ၊ မြေလောင်းပေါင်းသင် အစရှိသည့် လိုအပ်မှု တို့ မရကြသောအခါ ထိုပန်းပင်တို့မှ ပန်းပွင့်တို့သည် လှပစွာ မပွင့်ဖူးနိူင်ကြတော့ ။ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်က အချို့သောပန်းပင်များကား ပွင့်ဖူးခွင့်ကို မရကြတော့ချေ ။ ထိုသို့ မလှမပ ပွင့်နေကြသော ပန်းပင်တို့ကို ဈေးကွက်တင်သော အခါ ပန်းဟူသည့် ပုံသဏ္ဍန်သာ ရှိပြီး ပန်းပွင့်တပွင့်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါဖြင့် မပြည့်စုံသောကြောင့် ဈေးကောင်းမရ ။ ထိုသို့ လှပစွာ မဖူးပွင့်နိူင်သော ပန်းပင်များနှင့် ပွင့်ဖူးခြင်းမရသည် ပန်းပင်တို့ စုဝေးရာ ဥယာဉ်ကြီးသည် လှပမှုတို့ ပျောက်ဆုံးကာ ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်နေ သကဲ့သို့ အနာဂတ်မျိုးဆက်လူငယ်များ၏ ညဏ်ရည်ညဏ်သွေး ထက်မြက်မှုတို့ကို ပိုမို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ပညာရေးစနစ်ကြီး ပျက်စီးလာသော အခါ ထိုသို့သော မျိုးဆက်သစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တိုင်းပြည်ကြီးသည်လည်း ပြိုကျပျက်စီးလာသလို လူငယ်များ၏ အနာဂတ်သည်လည်း ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ကာ ဦးတည်ချက်တို့ ပျောက်ဆုံးလာကြသည် ။
” နိူင်လိုသူ ကို အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ ဆေး ” ဟူသည့် မြန်မာ စကားပုံ တခု ရှိပါသည် ။ ထိုစကားသည် ခန္တီပါရမီကို အဆုံးစွန်ထိကျင့်ကြံပွားများကာ တဖက်သား ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ၍ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်သူ များ အတွက် တကယ်ကောင်းပါသည် ။ သို့သော် ကိုယ်တိုင်က အရှုံးပေးလို စိတ်မရှိပါဘဲနှင့် မတတ်သာ၍ အရှုံးပေးလိုက် ရသူများ အတွက် နှလုံးမအေးတဲ့ အပြင် ပိုမို ဆိုးဝါးလာသည်ကို တွေ့ရှိနိူင်သည် ။ ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း အနိူင်ယူလိုသူကို မကျေနပ်ဘဲ အရှုံးပေး နေရသည့် အခါ အစ ပထမတွင် သိပ်မသိသာသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်းနှင့် နာကြည်းမုန်းတီးလာသည် ၊ ရွှံရှာလာသည် ၊ တုန့်ပြန် ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာ သည် ။ ထို့သို့ လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်ဖွားနေသော်လည်း စိတ်ထဲတွင် အကြောက်တရားက လွှမ်းမိုးနေသည့် အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး ဒေါသထွက်လာ သည် ၊ ကိုယ့်နှင့် စိတ် တထပ်တည်း မကျတော့ ၊ ထိုအခါ စိတ်မကြည် ၊ စိတ်မကြည်လင်သည့် အတွက် ညဏ် မရွှင်တော့ ၊ ညဏ်မရွှင်သော အခါ အတွေးအခေါ်တို့ ညစ်ညမ်းလာသည် ၊ လူ့သဘာဝ အရ စိတ်ညစ်လျှင် တရားထိုင်သူထက် ၊ မဟုတ်တာ လုပ်ကာ စိတ်ထွက်ပေါက် ရှာသူ က များသည် ။ အတွေးအခေါ်တို့ ညစ်ညမ်းလာသည့် အခါ ကမ္ဘာစောင့် တရားဟု လူသိများသည့် အရှက် အကြောက် တရားတို့ကို အမြင်လွဲမှားလာကြသည် ။ မကောင်းတာ လုပ်ရမည်ကို မရှက်ကြဘဲ ကောင်းတာလုပ်တာကို ရှက်လာတတ်ကြသည် ။ အကုသိုလ် အလုပ် လုပ်ရမည်ကို မကြောက်ကြဘဲ ကုသိုလ် အလုပ် လုပ်ရမည်ကို ကြောက်လာကြသည် ။
နိူင်လိုလျှင် အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ဆေး” ကြီးကို ကိုယ်ရင်ထဲက သည်းခံခြင်း တရား မပြည့်စုံဘဲ သောက်သုံးနေကြတဲ့ အခါ ကြုံတွေရတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ၊ ဆိုးကျိုးတွေကို ဆက်လက် မခံစားချင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ အနိူင်ယူနေသူတွေကို အရှုံးမပေးကြပါနဲ့ ။ မိမိတို့ တတ်နိူင်တဲ့ဘက်က တုန့်ပြန် တွန်းလှန်ကြပါ ၊ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် မဆောင်ရွက်နိူင်တဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေက ငွေအားနဲ့ ကူညီပေးကြပါ ၊ တကယ်လုပ်ရှား နေသူများကို ၀န်း ရံပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါသည် ။ မိမိတို့ကျရာ အခန်းဂဏ္ဍကနေ ကိုယ်တတ်နိူင်တဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးကြကာ မကြာမှီအချိန်အတွင်းမှာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတကာ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိူင်ငံတော်ကြီးဆီသို့ ညီညာစွာ စတင် ချီတက်ကြပါစို့………………။
Filed under ဗမာ့သွေး